अनलाइन रोमान्सको नाममा ठगी धन्दा, जोगिन के गर्ने ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
अनलाइन रोमान्सको नाममा ठगी धन्दा, जोगिन के गर्ने ?
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगसँगै मानव जीवन उत्तर आधुनिकताको नयाँ मोडमा घुमिरहेको छ । इन्टरनेट नै सबथोक बनिरहँदा अब मानिस अर्को विकल्प सोच्नै नसक्ने भएका छन् । युवा पुस्तामा अझ यसको प्रभाव देख्न सकिन्छ ।
अनलाइनमा मानिसहरूको यतिधेरै आशक्ति देखिँदा चुनौती पनि सँगै तेर्सिएका छन् । अझ पछिल्लो समय त अनलाइनबाटै प्रेम, अनि घरबार जोड्न चाहनेहरू बढिरहेका छन् ।
यसरी अनलाइनमा भर पर्ने पुस्तालाई निशाना लगाउन बजारमा अर्को गिरोह फैलिसकेका छन् । रोमान्समा चुर्लुम्म डुबेकाहरु दिनदिनै यस्ता गिरोहबाट ठगीमा परिरहेका छन् ।
उनीहरुको काम नै पहिले मन जित्ने अनि भटाभट रकम असुल्ने हो । तर मानिसहरुलाई आफ्नो उठिबास नलाग्दासम्म ठगिएको महसुस हुँदैन ।
केही समयअघि मात्र अमेरिकाको संघीय अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (एफबीआई) ले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई यसबाट जोगिन चेतावनी जारी गरिसकेको छ ।
रोमान्स स्क्यामरले लगानी, व्यापार र क्रिप्टोकरेन्सीका लागि पैसा माग्ने गरेको भन्दै एफबीआईले सम्भावित ठगीबाट पहिल्यै जोगिन आग्रह गरेको छ ।
एफबीआईका अनुसार यो वर्षको पहिलो ११ महिनामा मात्रै इन्टरनेट अपराध गुनासो सुनुवाई केन्द्रमा अनलाइन रोमान्स स्क्यामका १८ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । जसका कारण उनीहरूले १३३.४ मिलियन डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब ७४ करोड १२ लाख रुपैयाँ गुमाउनु परेको बताइएको छ ।
एफबीआईले बताए अनुसार स्क्यामरहरूले सामान्यतया पहिलो पटक पीडितहरूलाई डेटिङ एप तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि अनलाइन सम्बन्धका आधारमा उनीले विश्वास आर्जन गर्छन् ।
आफूलाई नाफामूलक क्रिप्टोकरेन्सी लगानी तथा व्यवसायिक अवसरहरूको राम्रो ज्ञान रहेको भन्दै फेक वेबसाइट तथा एपमा पुर्‍याउँछन् । उनीहरूको विश्वासलाई थप मजबुत पुर्‍याउन पीडितले प्रारम्भिक लगानी गरेपछि नाफा हुने कुरा देखाउन पीडितलाई केही थोरै मूल्य फिर्ता लिने अनुमति पनि दिन्छन् ।
त्यसपछि भने ठगहरूले पीडितलाई भारी मात्रामा लगानी गर्न उक्साउँछन् । जब अर्को पटक पीडितले लगानी फिर्ता गर्न चाहन्छ, त्यसपछि उनीहरूलाई विभिन्न बहाना बनाउँदै नसक्ने कारण देखाउँछन् ।
यस्तोमा उनीहरूले कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने अथवा न्यूनतम अकाउन्ट ब्यालेन्सको सीमा नपुगेको जस्ता कारणहरू अगाडि सार्ने गर्दछन् । यसरी पीडितलाई थप रकम लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । अनि जब पीडितले लगानी गर्न बन्द गर्छ, सामान्यतयाः ठगहरू त्यसपछि सम्पर्क टुटाउँछन् ।
यस्तो ठगीबाट कसरी बच्ने ?
अनलाइनमा मात्रै भेट भएका व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पनि रकम नदिनुहोस् र उनीहरूको सल्लाहकै आधारमा लगानी नगर्नुहोस् ।
आफूले विश्वास गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूसँग आर्थिक तथा वित्तीय पाटोको विषयमा कुराकानी नगर्नुहोस् ।
आधिकारिकताको विषय नबुझेर अनलाइन अथवा वेबसाइटमा कसैलाई पनि आफ्नो बैंकिङ सूचना, सामाजिक सुरक्षा कोषको नम्बर, आईडी, पासपोर्टको विवरण अथवा अन्य कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी नदिनुहोस् ।